भारतका चर्चित युट्युबहरु जसले गर्छन् सबैभन्दा बढी कमाई
एजेन्सी । पछिल्लो एक दशक यता युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर राम्रो आम्दानी गर्नेको संख्या धेरै नै रहेको छ । केही स्तरीय कन्टेट प्रस्तुत गरेर भिजिटर र फलोअर्स बढाउने काम पनि भइराख्दै आइरहेको छ । विस्तृतमा
साइबर ब्यूरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाउने पोखरेल पक्राउ
वर्ल्डलिंकको सद्भावनादूतमा नियुक्त भइन् शृङ्खला
जागरुक युवा समाजद्वारा आविष्कार केन्द्रलाई १ लाख सहयोग हस्तान्तरण
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको बायोमेट्रिक्स डिजिटल हाजिरी प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
अन्तरिक्ष पर्यटनको क्षेत्रमा अग्रपंक्तीमा रहेका दुई कम्पनीले आफू पृथ्वी बाहिरको पहिलो यात्रुवाहक उडानबाट केही महिना मात्र टाढा रहेको बताएका छन् । यद्यपि उनीहरुले मिति भने टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् ।
मोबाईल टुटफुट भएमा वा हराएमा मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल
काठमाडौं । मोबाइल हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ रु अब ढक्क हुनुहोस, चिन्ता लिनु नपर्ने भएको छ,
के तपाईं पनि दैनिक सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नुहुन्छ ?
सेल्फी कस्तो देखिएला भनेर तपाईंलाई चिन्ता लाग्छ ? त्यसो हो भने सजग हुनुहोस्, केही वर्षयताका विभिन्न अनुसन्धानले सेल्फीलाई मानसिक अस्वस्थतासँग जोडेका छन् ।
यी हुन् युट्युबाट सवैभन्दा धेरै पैसा कमाउने व्यक्तिहरु
काठमाडौं । धेरैले युट्युबलाई भिडियो हेर्ने मनोरञ्जनात्मक साइटको रुपमा मात्रै लिने गरेका छन् ।
एउटा यस्तो चस्मा जसले सिसिटिभीलाई पनि मात दिन्छ
एउटा अचम्म लाग्दो इन्भेन्सन भएको छ । एउटा यस्तो चस्मा जसले सिसिटिभीलाई पनि मात दिने भएको छ ।
भुलेर पनि नराख्नुहोस् यस्तो पासवोर्ड, ह्याक हुनसक्छ !
इन्टरनेटमा बढ्दो ह्याकिङका कारण सबैले विचार पुर्‍याएरमात्र पासवर्ड हाल्ने गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । महानगरीय अपराध महाशाखाले प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीको मान प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।